Saturday October 28, 2017 - 17:35:41 in Wararka
Qaraxa labaad ayaa yimid wax yar ka dib markii qarax kale oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray hotelka naasa hablood 2 oo ku yaalla agagaarka guriga hooyooyinka degmada Xamar-weyne ee gobolka Banaadir, kana fogeyn goobta qaraxa labaad uu ka dhacay.
Qaraxii hore ayaa waxaa xigay rasaas culus iyadoo rag hubeysan ay weerareen hotelka Naasa hablood-2
Ugu yaraan toban ruux ayaa la xaqiijiyey iney ku dhinteen qaraxii hore kuwaasoo isugu jira ilaalada hotelka iyo dad kale oo goobta ku sugnaa.
Waxaa cakiran goobtaas iyadoo rasaas culus ay isweydaarsanayaan raga hotelka weeraray iyo ciidamada amaanka, sidoo kale waxaa goobta gaaray gaadiidka gurmadka deg deg ah ee ambalaasyada oo halkaas ka qaadaya meydadka iyo dhaawacyada.
Lama oga sida xaalkoodu yahay wasiirada, xildhibaanada iyo dadka kale ee hotelkaas degan, ciidamada amaanka ayaa xiray wadooyin badanoo ka tirsan magaalada waxaana joogsaday socodkii dadka iyo gaadiidka.
La soco wixii warar ah ee ka soo kordha insha ALLAAH